127th Canton Fair ichaitirwa online kubva munaJune 15 kusvika 24, takaenda kumusangano wecanton nematumba 3-4 kubvira 2012, tiri kuenda kunogadzirira anotevera mabasa kuvhara kushomeka kweinternet Canton Fair.
1. Nguo mapikicha pamuenzaniso: Yedu nyanzvi R & D timu inogadzira iwo masampula matsva pamusoro pe1000 masitaera pagore, isu tinopa edu ekupedzisira magadzirirwo uye tigoita mafoto pane modhi yesarudzo yako.
2. Kuunzwa kwechigadzirwa chipfupi chevhidhiyo: Tichapa kuunzwa kweiyo pfupi vhidhiyo chigadzirwa, senge jira & zvishongedzo、purinda & embroidery、rakakosha basa uye zvichingodaro, izvo zvinokutendera iwe tarisa zvakanyatsojeka uye intuitive.
3. One-to-one vhidhiyo sevhisi: Ndokumbirawo ufone vhidhiyo nesu chero nguva kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, isu tinofara kupa-kune-imwe vhidhiyo sevhisi kukuratidza yedu sampuro uye kutsanangura ivo zvakadzama, izvo zvinokutendera kuti unzwe kuti iwe pachako uri pachiitiko.
4. 10 × 24 awa online yekugara imba: Tinogamuchira nemufaro kuuya kwako uye tinotarisira kupa imwe-kune-imwe vhidhiyo sevhisi yako.